DEG DEG+AKHRISO: M/weyne kuxigeenka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay talaabo uu qaaday M/weynaha Puntland,
August 18, 2019 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa markii ugu horeysay banaanka soo dhigay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan arrimaha guddiga Doorashooyinka KMG ah ee uu shalay magacaabay madaxweynuhu.
Guddigaas oo ka kooban 9 xubnood ayaa shan kamid ah uu soo magacaabay Madaxweynaha Puntland, waxaana afarta kale soo magacaabay Guddoomiyaha baarlamaanka, waxaana wararku shegayaan in ay taasi keentay khilaafkan.
Madaxweyne kuxigeenka ayaa qoraal uu soo saaray uuna ku socodsiiyey gudoomiyaha golaha wakiilada, ku cadeeyey sharciyada uu cuskanayo in uusan guddigan aheyn mid sax ah.
Qoraalka Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa u qornaa.
waxay ilatahay Mamulka puntland & dhulbahante in aay kala dhaqaqayan,waxan Badan Ayanu ka hadalanya dhulbahante in uu 0lalayo qof Mareexaan ah oo Xil haya,qof kasta oo wax garad ah waxuu 0gyahay hadey maqlan nin marexan ah aya mel lo dhibay maraks ayey ukala birmanayan,waxad garan kartan xiligi xukumada milatariga ee uu hogaminayey Alaha unaxariste Gen.Maxamed Siyaad Barre,Qoladi 1aad oo Nasnujinta ku haystey waxay ahayd dhulbahante waxa la’oran kara burburkii xukumadas so dadajiyey waxan umaleynaya in aay Ahayd Qolada dhulbahante, oo dhaqalaha wadanka Afka udhigtay waxna uqaban ayago ku qadanayey sababo kala duwan oo aay ugu horeyso kacanka anaga aya Difacayna ee Nasii dhaqalaha,waxay kutarena majirin kaliya waxay bobeen hantidii wadanka & isku Diriki bulshada somaliyed Akhikina kentay in somaliya burburto,marki danbe waxay wax kadhisten puntland & somaliland,malinba mel ayey uyacaan ujedadoduna wa cunto Doon kaliya,Axmed Karasha oo Xilween ku helay puntland waxu sameynayo wad aragtan Qodobo Been Been ah ayuu laso shirtegay,Waxad ogtihin Axmed karash wax Aqoon ah malaha,mekhanka uu hader haysto waxa uyelay puntland,in uu puntland ku kibro asago intas jira oo ah nin Daween,in uu maro wadadi Xumed ee uu maray Abixakim Abdulahi Cumar Camey,wa’ayan daro side dhulbahante banbe lo’aminaya? Madaxweyne farmajo wa tegaya 1 sano & bilo aya uharay waxan umaleynaya nin Danbe oo marexaan ah in uusan Xil Danbe muqdisho kaqabanan,dhulbahante waxan 0ran laha Arax aan lahuri Donin ayan fenta la dhameysan.
Qofkii reer puntlaan ah oo maanta ka rajo qaba in uu xamar nacfi ka helo waa NAGA DAYRO oo kaasi waa dhiiglaawe.War xamar ma aha xamarteedii hore oo way qaribantay.Xamar waan ka soo guuray oo an kala fogaanay oo anaan rajo dambe ka qabin in aan xamar ku noqono.Xamar iyo maamulkeedu halkooda ha naga joogeen oo ha is cayr-cayrsadeen ayagu.
Markii horuu qalad ku yimid ninkaan, dad iyagu ku diidan in wax laga dhigo ma aheyn.
Axmad karaash….. magacaabida gudiga doorashada in lagala tashado ma ah. waxaa si toos ah loogu sheegay in uu marti ku yahay Puntland ( majeerteeniya ) go,aamada siyaasiga ahna aanu waxba ku lahayn. hadal cad ayaa loogu sheegay, intaa haduu fahmi waayo isga ayaan waxb ahayn.